Wasiir Jubbaland oo Muqdisho lagu Xiray
Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland oo Lagu Xiray Muqdisho.
By Editor	 On Sep 1, 2019
Ciidamadda Nabadd Sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa Magaaladda Muqdisho ku xiray galabta wasiirka amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Janan.
Sida ay sheegayaan warar soo baxaya ciidamada amaanka ayaa gudaha garoonka ku xiray Wasiirka Amniga Jubbaland kadib markii ay ka reebeen diyaarad uu usii raaci lahaa magaalada Adis Ababa dalka Itoobiya uu safar u ahaa.
Lama oga sababta ka dambeysa xariga wasiirka amniga Maamulka Jubbaland.
Dhawaan Makamada Gobolka Banaadir ayaa soo saartay amar lagu burinayay waarankii horey loogu jaray Cabdirashiid Janan, waxaana xiligaa kadib Wasiirka amniga Jubbaland Muqdisho ku yimid safar qarsoodi ahaa iyadoona la xirin.
Qabashada Wasiirka amniga Jubbaland ayaa imaanaysa xili dowlada federaalka Soomaaliya ku amartay diyaaradaha tagaya iyo kuwa ka imaanaya magaalada Kismaayo soo maraan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde,waxaana arinkaas ka hor yimid Maamulka Axmed Madoobe.
wasiirka amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Janan.
Sarkaal Ka Tirsanaa warbaahinta Shabaab oo Muqdisho Lagu Qabtay.
JubbaLand ‘LABADEEDA’ Madaxweyne oo Xaflado loogu Sameeyay Minneapolis.